Wadoshaqeyn dhexmareysa Iswedhen iyo Turki - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Wadoshaqeyn dhexmareysa Iswedhen iyo Turki
La daabacay tisdag 12 mars 2013 kl 14.21
Gelinkii danbe ee maanta oo ah talaado ayaa waxaa kulan yeeshay wasiirka koobaad ee Iswedhen Fredrik Reinfeldt iyo madawxeynaha Turkiga Abdallah Gül oo booqasho qaran shaley ku yemid dalkaan Iswedhen.
Shir-saxaafedeed ay qabteen ayuu wasiirka koobad Fredrik Reinfeldt ku sheegay in isaga iyo madaxweynaha ay yeesheen wadoxaajood wanaagsan, ra'iisalwasaaraha waxuu sidoo kale sheegey in uu rajeynayo in gu'gaan ay dib u bilaamato wadoxaajeedkii ay Turk ku dooneysey in ay kaga mid noqoto urur weynaha EU.
Iswedhen ayaa kamid ah wadamada EU ee sida aadka ah ugu dooda in Turk ay kamid noqoto EU, laakiin wadoxaajoodka ay Turki kaga mid noqoneyso EU ayaa sannadyadii danbe ahaa kuwo aan sacon oo meeshooda tagnaa, arintaas oo ay sabaabta ugu weyn aheyd wadamada EU qaarkood oo ka horyemid in Turki kamid noqoto EU kuna xirey sharuudo badan oo ay tahay marka hore in Turkiga soo buuxiyaan inta aysan bilaamanin wadoxaajoodka ay kaga mid noqonayaan EU.
Inta uu kulanka u dhaxeeyey Fredrik Reinfelt iyo Abdallah Gül socdey ayaa waxaa looga hadley baahida loo qabo dastuur cusub oo uu yeesho dalka Turkiga iyo adeynta xaquuqda xoriyada qolka iyo xoriyada saxaafada iyo weliba sidoo kale adeynta xaquuqda dadka laga tiro badanyahay ee dalkaas, tusaale dadka Kurdida.
Laakiin Reinfeldt ayaa sheegay in uu aaminsayahay in Turki ku tilaabsatey hor-u-mar marka laga hadlayo arimahaas kor ku xusan, tusale xaquuqda dadka laga tiro badanyahay ee dalkaas, waxuuna sidoo kale shir-saxaafadedkiisa ku sheegay in ka hadalka xaquuqda Kurdiyiinta sannadyadii ugu danbeeyey hor-u-mar Turki ka sameysey.